Deeyoo Sport | Archive | Wararka Suuqa
Home » Archives by category » Wararka Suuqa
Real Madrid,Chelsea iyo Man city oo walli ku dagaalamaya saxiixa Edinson Cavani.
Posted on June 13, 2013 by mooge2012 and saved under Latest News, Wararka Suuqa, Yurub
Real Madrid,Chelsea iyo Man city oo walli ku dagaalamaya saxiixa Edinson Cavani. Kooxda Real Madrid ee dalka Spain ayaa dagaal la galayso mar kale kooxaha reer England ee Chelsea iyo Man city kuwaas oo ay ku dagaalamayaan ciyaaryahan Edinson Cavani. Edinson Cavani oo u dhashay dalka Uruguay ayaa noqday mid…
Kooxda PSG oo 85 Milyan ku doonayso Gareth Bale.
Kooxda PSG oo 85 Milyan ku doonayso Gareth Bale. Naadiga ah horyaalka Faransiiska PSG ayaa diyaarinayso inay kaga adkaato kooxda Real Madrid saxiixa ciyaaryahanka garabka Gareth Bale. PSG ayaa soo bandhigtay lacago dhan 85 milyan oo gini oo ay ku doonayso ciyaaryahanka baalka bidix ee kooxda Tottenham Gareth Bale kaasi…
Man utd,Monaco,Roma iyo Napoli oo ku dagaalamaya Cabaye.
Man utd,Monaco,Roma iyo Napoli oo ku dagaalamaya Cabaye. Kooxaha Monaco,Roma,Napoli iyo Man utd ayaa ku dagaalamaya ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Newcastle Yohan Cabaye. Yohan Cabaye oo 27 jir ah ayaa u ciyaaro kooxda reer England ee Newcastle wuxuuna ciyaaro wanaagsan kazoo bandhigay kulamii naadigiisa uu u ciyaaray xilli ciyaareedkii dhamaaday.…
Barcelona oo Doonayso Fernando Torres.
Barcelona oo Doonayso Fernando Torres. Kooxda Barcelona ayaa ugaarsi ugu jirto weeraryahan xilligii dhalinaya goolal u dhaxeeyo 20 ilaa 25 gool kaasi oo ah Fernando Torres. Lionel Messi iyo Neymar kaliya ma noqon doonan waa hogamiyayasha weerarka kooxda Barcelona laakin Fernando Torres ayaa noqon doonno weeraryahan kale oo leh…
Roma oo ku dhawaaqayso Rudi Garcia inuu noqdo Tababaraheeda cusub.
Posted on June 12, 2013 by mooge2012 and saved under Latest News, Wararka Suuqa, Yurub
Roma oo ku dhawaaqayso Rudi Garcia inuu noqdo Tababaraheeda cusub. Wararka ka imaanaya dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in kooxda Roma ay si rasmi ah ugu magacaawday macalinkeeda cusub tababarha lagu magacaabo Rudi Garcia. Sida uu baahiyay TV-ga Sky sport Italia Naadiga Roma ayaa shaaca ka qaaday in ay si rasmi…
Page 1 of 68123Next ›Last »	Next